ငွေလိမ်ချင်တာလား လူပွဲစားလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ငွေလိမ်ချင်တာလား လူပွဲစားလား
- Sa Lone
Posted by Sa Lone on Dec 24, 2012 in Copy/Paste | 11 comments
မင်္ဂလာပါလို့ကျနော်ကိုစလုံးမိတ်ဆက်ပရစေ။
လာလိမ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့သူက မိန်းကလေး ချောချောပါ ကရင်လေသံနဲ့ ဆိုတော့ ကရင်မလေးပဲဆိုပါစို့ . ၂ကြိမ်မြောက်လာလိမ်မှ နဲနဲရိပ်မိတာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ညီတယောက်ငွေလိုတယ်ဆိုရင် ကျနော်သယ်ငယ်ချင်းမိန်းကလေးတယောက်ဆီပဲသွားယူခိုင်းပါတယ်။ နောက်မှ သူနဲ့ ကျနော်ရှင်းပေါ့။ ဒါနဲ့ ကျနော်ကယူခိုင်းပါတယ်ဆိုပြီး ကောင်လေးတစ်ယောက်လာလို့ငွေငါးသောင်းပေးလိုက်တယ်လို့သူငယ်ချင်းလုပ်သူဖုန်းဆက်တော့ ကျနော် ညီလုပ်သူကိုတမ်းပြီးဖုန်းဆက်မေးပါတယ် ” မင်းဘာဖြစ်လို့ ငါ့ကိုအသိမပေးပဲ သွားယူရတာလဲပေါ့ ” ညီလုပ်သူလည်း သူတကယ်မယူတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ ကဲရှိစေတော့ဆိုပြီး ကျနော့် သူငယ်ချင်းလုပ်သူကိုပိတ်လိုက်ပါတယ် ကျနော့် နာမည်ပြောပြီးဘယ်သူပဲလာယူယူမပေးဖို့ ။
ဒီတစ်ခါတော့ မိန်းကလေးချောချောလေးပါ. ကျနော်ကလွတ်လိုက်လို့ စာရွက်စာတမ်းတွေနိူတြီပြန်ချင်လို့ လိုက်ပို့ ပါဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း အမစိုက်ထားပါကျနော်နဲ့ ရှင်းမယ်ဆိုပြီးပေါ့ .. စိုက်ပေးတာအကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် ငွေစရင်းရှင်းတမ်းတွေပါလက်မှတ်ထိုးဖို့ ပါပါတယ်. ထူးခြားတာက ဒီလောက်စကားပြောလည်တဲ့မိန်းကလေးက ဒီဆိုင်တွေမသွားတတ်ဘူးဆိုပြီး သူငယ်ချင်းလုပ်သူ ကိုပဲအပြင်အတင်းခေါ်ထုတ်ပါတယ်.. သူငယ်ချင်းလုပ်သူလည်း လန့် ပြီး ကျနော်ကိုသေချာအောင်မေးမယ်စိတ်ကူးနဲ့နောက်ရက်မှလာခဲ့ငါ ဒီနေ့ မအားသေးဘူးလို့ ပဲပြောပြီး ကျနော်ဆီကိုဖုန်းဆက်တော့ ကျနော်လည်းအံအားသင့်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ နောက်ရက်လာခဲ့လို့ ရှိရင် ဓတ်ပုံသာရိုက်ယူထားလိုက် ဆိုပြီးမှာထားပါတယ်
ဒါပေမယ် လူလိမ်မကလူကိုယ်တိုင်မလာပါဘူး ကျမအရမ်းအရေးကြီးလို့ ကားလွတ်လိုက်ပါမယ် အမအမြန်လာပါပဲ အတင်းဖုန်းဆက်ခေါ်ပါတယ်. ခေါ်တဲ့ဖုန်းကလည်း PCO ဖုန်းနဲ့ ပါ။ ဒီတော့မှ သူငယ်ချင်းလုပ်သူလဲ.. နင်ဘယ်သူလဲ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီလိုလုပ်တာလဲ . ငါအကုန်မေးပြီးဘီ. နင့်ကိုရဲတိုင်လို့ ရတယ်ဆိုမှ ချက်ချင်းဖုန်းချသွားပါတယ်။
ဒီမိန်းကလေး ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ မရပါဘူး။ ဒါကိုမလုပ်ခင် သူတို့ ဟာ အကွက်ကျကျ ကြိုတင် plan ချထားပုံပါ။ သူတို့ ပစ်မှတ်သားကောင်ရဲ့ နာမည်၊ သူနဲ့ စပ်ဆက်သူ၊ဖုန်းနံပါတ်.. စတာတွေကိုကြိုလေ့လာထားပုံပါ။
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမိန်းကလေးကို အပြင်အတင်းခေါ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ ငွေလိမ်ချင်တာလား လူပွဲစားလားဆိုတာ ကျနော်စဉ်စားလို့ မရပါဘူး။
ပြောချင်တာကတော့ အခုနောက်ပိုင်းလိမ်တဲ့လူတွေဟာ အဆင့်မြင့်ပါတယ်. ရုပ်ကလည်းထင်ရက်စရာမရှိပါဘူး။ အားလုံးသတိထားကြဖို့ ပါ။ အခုလိုအဖြစ်မျိူးကြုံတဲ့လူရှိရင် လိမ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့လူကို ဖုန်းနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်
About Sa Lone
Sa Lone has written 1 post in this Website..
View all posts by Sa Lone →
လူလိမ်တွေ ဟာ နည်း အမျိုးမျိုး နဲ့ မရိုး နိုင်အောင် လိမ်နေကြ ပါ တယ်။ နိုင် ငံခြား ရောက်နေတဲ့ သူတွေ ရဲ့  မိသားစု ၀င် တွေ ဟာလည်း လူ လိမ် တွေ ရဲ့ သားကောင် ဖြစ်တတ် ကြတယ်။ ကျမ ကြုံ ခဲ့ ဖူးတာကို ….လူလိမ်လား အနုကြမ်း စီးတာလား….( လင့် မပေး တတ်ဘူး၊ဘယ်လို ပေးရ လဲ သိရင် ပြောပေးကြပါ ) ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပိုစ့် တစ်ခု တင် ဖူးတယ်။
အသိ တစ်ယောက်ကြုံ တာ ကျတော့ သူ့နာမည် နဲ့ ဖုန်း ၀င်လာပြီး သူ့ ယောက်ျား နိုင် ငံခြား က နေ ပစ္စည်း လူကြုံထည့် ပေး ထားတယ် ၊ အပြင်သွား ဖို့ ရှိလို့ ချက်ချင်း လာယူ ပါဆိုပြီး လိပ်စာ တစ်ခု ပေး တယ် ။ သူ့ ယောက်ျား ကို ဖုန်း ဆက်မေးတော့ ဘယ်သူ့ ကို မှ လူကြုံ ထဲ့ မပေးထား ကြောင်း နဲ့ သွား မယူ ဖို့ ပြော တယ်။ အဲဒီ ဖုန်း နံပါတ် ကို ပြန် ဆက်တော့ ပိတ်ထားတယ်။
ညနေလောက် ကျ လူလိမ် ဘက်က မလာသေးဘူးလား လို့ ထပ်ဆက်လာတော့ ၊ ယောက်ျား ကိုမေးပြီးပြီ ၊ ဘာမှ ပို့ မထား ဘူး လို့ ပြန်ပြော လိုက်တော့ မှ ပစ္စည်း ပေါ် က ဖုန်း နံပါတ် အတိုင်းခေါ်တာပဲ ။ မှားရေးပေးလိုက်တယ် ထင်တယ် လို့ ဆိုပြီး လျှောချ သွားရော။
ပစ္စည်းလူကြုံ ထည့် ပြီး ရင် ဘယ်သူမှကိုယ့် ဖုန်း နံပါတ် မှားမရေး ပေး ဘူး။ ခုက နာမည်နဲ့ ဖုန်း နံပါတ် ကို မှန်အောင် စုံ စမ်း ပြီး မှ တဘက်က သိသွားလို့ လျှောချတာ ။ သူတို့ စုံတွဲ က အဆက်သွယ်အမြဲ ရှိနေတဲ့ သူ တွေ မို့ လို့ တော်သေးတယ်။
နိုင်ငံခြား က လူကိုသာ လှမ်း မမေး ပဲ ၀မ်းသာအားရ သွား ယူ လိုက် လို့ကတော့ လူပဲ ပါမလား၊ ငွေပဲ ပါမလား မသိပေမယ့် သူတို့ ဆင်တဲ့ ဂွင်ထဲ ရောက် သွား မှာတော့ သေချာတယ်။
တပတ် တခါ လောက်ပဲ ဖုန်း ခေါ် ဖြစ် ကြတဲ့ လင်မယား တွေ ဆို ဘယ်လို လုပ် မလဲ ၊ ၂ ခါလောက် ဆက် လာ ပြီ ဆိုတော့ အမျိုး သမီး ဘက်ကလည်း ဟုတ် နိုးနိုး နဲ့ သွား ယူ ဖြစ် မလား ပဲ။
နိုင်ငံခြား က ကိုကို တွေ မြန်မာပြည်က မမ တွေ ကို သတိပေး လို့ ရအောင် ကြုံ တုန်း ကွန်မန့် ၀င် ပေး လိုက် ပါတယ်။
ကိုယ်ရေးတဲ့ ပို့စ်ကို Linkပေးချင်ရင် အဲဒီပို့စ်ကိုဖွင့် address bar ကို copy&paste လုပ်ပေးလိုက်တယ်။
အသိတရား… သတိတရားတွေ လက်ကိုင်ထား နေထိုင်ကြတာပေါ့နော်..
လောကလူ့ရွာကြီးက ရိုးအ နေလို့ မရတော့ဘူး… လိမ်လည်သူတွေ လုပ်စားနေတဲ့ ခေတ် ဖြစ်နေပီ…
Sa Lone says:
ဟုတ်ပါတယ်. လိမ်တဲ့လူဟာ စကားပြောလည်းအတော်လည်ပါတယ်. သားကောင်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကိုလိုက်ပြီး အမျိူးမျိူးလှည့်ပြောတတ်ပါတယ်။ နောက်တခုက သူပြောသမျှကို
သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးဖြစ်သူဟာ မလွန်ဆန်နိူင်ပဲခေါင်းတွေပဲအသွင်သွင်ငြိမ့်နေမိပါတယ်တဲ့… ဒါတောင် သူ့ ဆိုင်အတွင်းမှာ သူ့ လူတွေရှိနေလို့ ပါ..။ အပြင်တစ်ခြားနေရာသာခေါ်ထုတ်သွားရင်မလွယ်ပါဘူး…။
ချောချောလှလှလေးသာ လာလိမ်မယ်ဆိုလို့ ကတော့လေ
သူတို့က ဗိုက်ခေါက်နဲ့ ပေါင်တွင်းကြောပဲ လိမ်မှာတဲ့။
လိမ်တဲ့လူတွေဟာ သဲလွန်စလေးတစ်ခုရရင်ပဲ လှည့်ပတ်ပြောပြီး လိမ်တတ်ကြပါတယ်။
ကိုယ်ကလည်း နည်းနည်းရိုးအရင်ဖြစ်စေ။လည်သော်လည်း လောဘရှိနေရင်ဖြစ်စေ အလိမ်ခံရတတ်ပါတယ်။
စလုံး စလုံး ဖိုးစလုံးရေ
မင်္ဂလာပါဗျာ အခုလို ပြန်လည်ဝေမျှမှုအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
လိမ်တာတွေတော့ တော်တော်များများ တွေ့ဖူး ကြုံဖူးပါတယ်။
နေရာပေါင်းစုံးမှာ နည်းပေါင်းစုံ နဲ့လိမ်တဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။
လူတိုင်းသတိနဲ့ သူပြောတဲ့စကား သူလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ ဘာကိုရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာ
ကောင်းကောင်းအကဲခတ်ဖို့ပါ လိမ်တဲ့လူဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါစေ
ဟာကွတ် တစ်ကွတ်တော့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ သတိလေးနဲ့နေကြဖို့ပါ။
လိမ်တယ်၊ အလိမ်ခံရတယ်ဆိုကတည်းက မကောင်းဘူးပေါ့
(ဝိုင်းဆဲဂျပါကုန် :harr: –
ခွက်ဒစ်တော့ ပေးချင်တယ် ဒါပေမယ့် ဘူပြောတာလဲ ဆိုတာ မှတ်မထားမိဘူး)
နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် မြန်မာပြည်နဲ့ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ချင်လို့ဆိုပြီး ချိန်းတယ်။
ပထမတော့ လူလိမ်လား မသိဘူး။
ဘယ်လိုနည်းနဲ့လိမ်လိမ် ကိုယ့်ဆီက ငွေမထွက်ရင် သူလိမ်လို့ မရဘူးဆိုပြီး သွားတွေ့မလို့။
ဒါပေမယ့် စကားပြောရင်းနဲ့ သူ့စကားတွေက မူမမှန်ပဲ သူ့ကိုယ်သူ မွှမ်းတာတွေ များနေလို့ စိတ်မသင်္ကာတာနဲ့ပဲ သွားမတွေ့တော့ဘူး။ :buu: